माओवादी केन्द्रले थारुलाई फेरि थाङ्‍नामा सुतायो — OnlineDabali
देशमा संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको प्रावधान अनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी ३ तहको राज्य संरचना हुने व्यवस्था बन्यो । संविधानमा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेर नेपाली काँग्रेसलाई झाडुले बढारे झैं गरे । राम्रो पकड भएको स्थानमा पनि हार बेहोर्नुको पीडा नेपाली काँग्रेसलाई त छँदैछ । तर, बाम एकताको कारण जितमा मात्तिएका गठबन्धनमा पनि यतिबेला केहीलाई उकल्नै नसक्नु पीडा जनतामाझ छर्लंगै देखिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्नपछि दलबीच संसदीय भागबन्डामा पार्टी भित्रैबाट ठूलो लडाइँ भइरहेको छ । जुन लडाइँमा थारु समुदाय दुई धारिलो तरवारको बीचमा खुम्चिएर बस्नु परेको छ । किनकी उ न निस्कन सकेको छ न त थाप्न नै । त्यो तरवालले जतिबेला पनि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने आशा, डर–त्रासबीच खुम्चिएर बस्नु बाहेक उसँग कुनै विकल्प छैन । कताकता सुनिएको छ कि प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकियोमा थारु निराश छन् । र कतै यो पनि सुनिन थालेको छ कि अस्थायी राजधानी धनगढी हुँदैमा थारु समुदायको थरुहट आन्दोलन सधैको लागि साम्य हुन्छ र प्रदेश नं. ७ मा थारु र पहाडीबीचको सद्भाव कायम हुन्छ ।
हो, प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकियो । राजधानीभित्र बहुसंख्याक रुपले बसोबास गर्दै आएको समुदायहरुले संसद चलाउने चावी नदिएपछि राजधानी तोकिदैमा खुशी हुनुको कुनै तुक छैन । थारु सामुदाय विगतदेखि नै त्यही चावी नपाएर पछाडी परेको हो ।
देश नयाँ संरचनामा जाँदैछ । तर, थारु समुदाय फेरि नयाँ संरचनाको गर्भबाटै हेपिन शुरु भइसक्यो भने जन्मि सकेपछि हरेक तह र तप्कामा नहेपिने सवाल नै छैन । यतिसम्म कि नेपालको राज्यसत्ताले थारु शब्द रहेसम्म यो जातिलाई हेप्ने र अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गोट्टी अगाडि सारिरहनेछ ।
देशमा एउटा वर्ग जहिले राज्यसत्ता हाँक्दै जाने र अर्को वर्ग बलीको बोका बन्दै जाने परिपाटीको अन्त्य होला भनेर सबै जनता संघीय राज्यलाई स्वीकार गरेका हुन् । संविधानले संघीय राज्य सञ्चालनमा सबै जातजाती वर्ग समुदायको समान सहभागिता हुने धारा– उपधारामा सामाबेश गरेको छ । थारु समुदाय संविधान जारी हुनु अगावै आफ्नो पहिचानसहितको अधिकार र अधिकारसहितको सहितको संघियताको माग गर्दै थरुहट क्षेत्रमा आन्दोलनका राँको बाले । गोली बारुद पड्क्यो । महिनौ दिन कर्फ्यु लाग्यो । टीकापुरमा ठूलो घटना घट्यो । राजनीतिक दलले त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्न विभिन्न रणनीतिहरु बनाए । मसिना मसिना प्वालका जालहरु बुने । थारु नेताहरुलाई ठूला–ठूला ललिपप चुसाए । त्यही ललिपपको रसमा कति विष लुकेको थियो भन्ने भान अहिले थारुहरुलाई हुँदैछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एक महिना अगाडिदेखि बुनेको जालमा अहिले थारुहरु मजाले फसे । चुनावको माहोल तताउन थारुलाई मुख्यमन्त्री या प्रदेश प्रमुख पक्का । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेला बाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी मागपत्र अघि सार्दै थारु समुदायबाट मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुख पक्का भन्दै थारु समुदायलाई भोट बैंक बनाए । थारुहरु पनि बाम गठबन्धनको रसिलो अश्वासनमा लिप्त भए । बाम गठबन्धनलाई जिताउन रस्साकस्सी गरे ।
अन्ततः प्रदेश मुख्यमन्त्री वा सभामुखमा बाम गठबन्धनबीचको भागबण्डामा प्रदेश नं. ७ मा माओवादीलाई भाग पार्ने निर्णयप्रति पार्टीले सहज स्वीकार गर्यो तर थारुलाई मुख्यमन्त्री नबनाउने खेल माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सुरु गरे । चुनावको बेला मुख्यमन्त्री दिने भन्दै भोट मागेको माकेले फेरि एक पटक थारुलाई थाङ्नामा सुतायो ।
पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डर भन्छन्- लेटरप्याडको दुरुपयोग भयो, मुख्यमन्त्रीमै उम्मेदवारी दिन्छु
उत्तर कोरियाले दियो म्यानमारलाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र सिरियालाई रासायनिक हतियार